ထူးဆန်းထွေလာ – ရွှေပြည်သစ် မီဒီယာ
မသေသေးဘူးဆိုပြီး သံသယရှိလို့ သမီးအလောင်းကို ပြန်တူးကြည့်တဲ့အခါ . . .
သမီးအလောင်းကိုသေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းတို့ ကြားမှာ စက္ကူထက် ပိုပြီးပါးတဲ့ အလွှာကလေးသာ ခြားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူတစ်ယောက် သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေပြီးနောက်၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပျက်စီးမှုကလည်း လျှင်မြန်ပါတယ်။ သေပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး မာကြော၊ အေးစက်လာမယ်။ ဒါက ကနဦး အဖြစ်အပျက်ပါ။ Continue reading “မသေသေးဘူးဆိုပြီး သံသယရှိလို့ သမီးအလောင်းကို ပြန်တူးကြည့်တဲ့အခါ . . .”
Posted in ထူးဆန်းထွေလာ, နိုင်ငံတကာLeaveaComment on မသေသေးဘူးဆိုပြီး သံသယရှိလို့ သမီးအလောင်းကို ပြန်တူးကြည့်တဲ့အခါ . . .
သရဲတစ်ကောင်နဲ့ ချစ်တင်းနှောခဲ့ဖူးကြောင်း ဝန်ခံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး
Posted on January 18, 2019 by moezaw
Sian Jameson လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ (၁၉)ရာစုတုန်းကသေဆုံးခဲ့ပြီး သရဲဖြစ်နေတဲ့ ဝိဉာဉ်တစ်ကောင်နဲ့ ချစ်တင်းနှောခဲ့ဖူးတယ်လို့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံကတော့ ယုံရခက်ခက်ပါဘဲ။ သူမရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေမှာ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေ ပါဝင်နေလို့ အများဝေဖန်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Continue reading “သရဲတစ်ကောင်နဲ့ ချစ်တင်းနှောခဲ့ဖူးကြောင်း ဝန်ခံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး”
Posted in ထူးဆန်းထွေလာ, နိုင်ငံတကာLeaveaComment on သရဲတစ်ကောင်နဲ့ ချစ်တင်းနှောခဲ့ဖူးကြောင်း ဝန်ခံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး
ညီအစ်ကို (၅) ယောက်လုံးကို ယူထားပြီး တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူနေသော အမျိုးသမီး
Posted on January 14, 2019 by moezaw
ဒါကိုပဲ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေလို့ ပြောကြတာပါ။ ဒီနေရာမှာ ယောက်ျား တစ်ဦးက ဇနီး ၄ ၊ ၅ ဦးကို တပြိုင်တည်း လက်ထပ်ပေါင်းသင်းနေတယ်ဆိုတာ မထူးဆန်းပေမယ့် မိန်းမ တဦး က ခင်ပွန်း ယောက်ျား ၅ ဦးကို တပြိုင်တည်း ပေါင်းသင်းတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုး ကတော့ ထူးဆန်းမနေဘူးလား။ ဒီလိုထူးဆန်းမှုကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တကယ်ရှိနေပါတယ်။ သူကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက Continue reading “ညီအစ်ကို (၅) ယောက်လုံးကို ယူထားပြီး တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူနေသော အမျိုးသမီး”
Posted in ထူးဆန်းထွေလာ, လူမှုဘဝ, နိုင်ငံတကာLeaveaComment on ညီအစ်ကို (၅) ယောက်လုံးကို ယူထားပြီး တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူနေသော အမျိုးသမီး
Posted on January 6, 2019 January 6, 2019 by moezaw
ဘာမြူဒါ ဆိုရင် အဖြေရှာဖို့ခက်ခဲတဲ့ ထူးဆန်းမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ နေရာလို့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အဓိကကတော့ အဲဒီနေရာကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ သင်္ဘောတွေလေယာဉ်တွေ အစအနမကျန်ပဲ ပျောက်ပျောက်သွားတတ်လို့ပါပဲ။ ဘာမြူဒါတြိဂံလိုပဲ နေရာတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုရင် မသိသေးသူများ အံသြသွားနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာမြူဒါနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ရေကန်တစ်ခုဟာ အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ် နာဂဒေသ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ Continue reading “မြန်မာနိုင်ငံက ဘာမြူဒါ (သို့) မြန်မာ့ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်”
Posted in ထူးဆန်းထွေလာ, ဗဟုသုတLeaveaComment on မြန်မာနိုင်ငံက ဘာမြူဒါ (သို့) မြန်မာ့ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်
တောင်ကိုရီးယားတွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ မဖြစ်မနေ ရည်းစားထားနေရ
Posted on January 2, 2019 by moezaw
ဆိုးလ်ရှိ ဒေါင်ဂွတ်နှင့် ကွမ်ဟီတက္ကသိုလ်တို့က ချစ်မှုရေးရာဘာသာရပ်များ ပို့ချနေပြီး ယနေ့ခေတ်လူငယ်တို့သည် မိသားစုဘ၀ မထူထောင်လိုကြတော့သည့်အတွက် ၎င်းတို့ကို အဓိကရည်ရွယ်ကာ ယင်းဘာသာရပ်ကို ပို့ချနေခြင်းဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရရန် မလွယ်ကူခြင်းနှင့် ပညာသင်စရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်းတို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်လူငယ်အများစုသည် သမီးရည်းစားထားခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုသားမွေးခြင်းဆိုသည့် ကိစ္စရပ်များကိုစိတ်မဝင်စားကြတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် Continue reading “တောင်ကိုရီးယားတွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ မဖြစ်မနေ ရည်းစားထားနေရ”
Posted in ထူးဆန်းထွေလာ, နိုင်ငံတကာLeaveaComment on တောင်ကိုရီးယားတွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ မဖြစ်မနေ ရည်းစားထားနေရ
အရင်ဘ၀တုန်းက ချစ်သူတွေဆိုပြီး အမြွှာမောင်နှမရင်းကို ထိမ်းမြားပေးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်
Posted on January 1, 2019 January 1, 2019 by moezaw
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အသက်(၆) နှစ်အရွယ် အမွှာမောင်နှမနှစ်ဦးကို ၄င်းတို့ရဲ့ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် ထိမ်းမြားပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကောင်လေးနာမည်က ဂီတာဖြစ်ပြီး ကောင်မလေးနာမည်ကတော့ ကီဝီပါ။ နှစ်ဦးစလုံးဟာ (၂၀၁၂) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ အမွှာမောင်နှမတွေအဖြစ် မွေးဖွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ မိဘတွေကတော့ ကလေးနှစ်ဦးဟာ အရင်ဘ၀တုန်းက ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ ယူဆထားပြီး Continue reading “အရင်ဘ၀တုန်းက ချစ်သူတွေဆိုပြီး အမြွှာမောင်နှမရင်းကို ထိမ်းမြားပေးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်”
Posted in ထူးဆန်းထွေလာ, နိုင်ငံတကာLeaveaComment on အရင်ဘ၀တုန်းက ချစ်သူတွေဆိုပြီး အမြွှာမောင်နှမရင်းကို ထိမ်းမြားပေးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်
ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူအိုကာပြည်နယ်က အဘိုးအိုတစ်ဦးဟာ သေဆုံးဇနီးဖြစ်သူရဲ့ ရုပ်အလောင်းနဲ့ တစ်နှစ်ကျော် နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ China Press က သတင်းဖော်ပြပါတယ်။
အသက် ၇၄ နှစ်ရှိ အိုကူဒါယိုရှီဟီဆာဟာ သူ့အိမ် အဖျက်ခံရမှာကြောင့် ဖယ်ပေးခဲ့ရာကနေ ခုလို ရုပ်အလောင်းကို ကန်ထရိုက်တွေက တွေ့ရှိတာပါ။
အရိုးကျနေပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်အလောင်းကို တွေ့ရှိတာကြောင့် ကန်ထရိုက်တွေဟာ ရဲကို အကြောင်းကြားပါတယ်။
ရဲက အဲဒါကြောင့်ပဲ အဘိုးအို အိုကူဒါကို ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ ဇနီးဖြစ်သူ ယူမီကိုနဲ့ ၃၃ နှစ်ကြာ ပေါင်းသင်းခဲ့ပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေက ထုတ်ပေးတဲ့ ယူမီကိုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ တစ်ခုမှ မရှိတာကြောင့်လည်း ရဲက အမျိုးကို ဖမ်းတာပါ။
ယိုရှီဟီဆာဟာ ယူမီကိုကို နိုက်ကလပ်တစ်ခုမှာစတွေ့တာဖြစ်ပြီး ယူမီကိုဟာ မှတ်ပုံတင်လို မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ မတော်တဆ ပျောက်ဆုံးခဲ့တာလို့ပဲ သိထားတာပါ။
သူတို့နှစ်ဦး ပေါင်းသင်းတာကိုလည်း တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ပင်စင်နဲ့ ရပ်တည်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှတော့ ယူမီကိုဟာ သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယိုရှီဟီဆာဟာ ဇနီးသည်ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို မြုပ်နှံခြင်း မရှိဘဲ အနံ့အသက် ပျောက်ဆေးတွေ အလောင်းပတ်လည်မှာ ပျက်ဖျန်းပြီး ထားရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သဆေုံးဇနီးသညျ ရုပျအလောငျးနဲ့ တဈနှဈကြျော နထေိုငျခဲ့တဲ့ အဘိုးအိုကို ရဲက ဖမျးဆီး
ဂပြနျနိုငျငံ ဖူကူအိုကာပွညျနယျက အဘိုးအိုတဈဦးဟာ သဆေုံးဇနီးဖွဈသူရဲ့ ရုပျအလောငျးနဲ့ တဈနှဈကြျော နထေိုငျခဲ့တယျလို့ China Press က သတငျးဖျောပွပါတယျ။
အသကျ ၇၄ နှဈရှိ အိုကူဒါယိုရှီဟီဆာဟာ သူ့အိမျ အဖကျြခံရမှာကွောငျ့ ဖယျပေးခဲ့ရာကနေ ခုလို ရုပျအလောငျးကို ကနျထရိုကျတှကေ တှရှေိ့တာပါ။
အရိုးကနြပွေီဖွဈတဲ့ ရုပျအလောငျးကို တှရှေိ့တာကွောငျ့ ကနျထရိုကျတှဟော ရဲကို အကွောငျးကွားပါတယျ။
ရဲက အဲဒါကွောငျ့ပဲ အဘိုးအို အိုကူဒါကို ဖမျးဆီးခဲ့တာပါ။ ဇနီးဖွဈသူ ယူမီကိုနဲ့ ၃၃ နှဈကွာ ပေါငျးသငျးခဲ့ပမေယျ့ အာဏာပိုငျတှကေ ထုတျပေးတဲ့ ယူမီကိုနဲ့ ပတျသကျတဲ့ မှတျတမျးမှတျရာ တဈခုမှ မရှိတာကွောငျ့လညျး ရဲက အမြိုးကို ဖမျးတာပါ။
ယိုရှီဟီဆာဟာ ယူမီကိုကို နိုကျကလပျတဈခုမှာစတှတေ့ာဖွဈပွီး ယူမီကိုဟာ မှတျပုံတငျလို မှတျတမျးမှတျရာတှေ မတျောတဆ ပြောကျဆုံးခဲ့တာလို့ပဲ သိထားတာပါ။
သူတို့နှဈဦး ပေါငျးသငျးတာကိုလညျး တရားဝငျ မှတျပုံတငျထားတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ပငျစငျနဲ့ ရပျတညျပွီး နထေိုငျခဲ့ကွပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈမှတော့ ယူမီကိုဟာ သဆေုံးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယိုရှီဟီဆာဟာ ဇနီးသညျရဲ့ ရုပျအလောငျးကို မွုပျနှံခွငျး မရှိဘဲ အနံ့အသကျ ပြောကျဆေးတှေ အလောငျးပတျလညျမှာ ပကျြဖနျြးပွီး ထားရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Posted in ထူးဆန်းထွေလာ, နိုင်ငံတကာLeaveaComment on သေဆုံးဇနီးသည် ရုပ်အလောင်းနဲ့ တစ်နှစ်ကျော် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အဘိုးအိုကို ရဲက ဖမ်းဆီး
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၉ နှစ်က သေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ သမီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရလိုက်တဲ့ အသက် ၈၈ နှစ်အရွယ် အဘွားအို
Posted on December 13, 2018 by moezaw
၁၂၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၈
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၉ နှစ်က မီးဖွားနေစဉ်အတွင်းမှာ သေဆုံးသွားတာလို့ဆိုတဲ့ သမီးဖြစ်သူဟာ အသက် ၈၈ နှစ်အရွယ် မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံသွားပြီလို့ နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာက ဖော်ပြပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က ပူရင်တန်ဆိုသူ အမျိုးသမီးကြီးဟာ ဗားမောင့်မြို့မှာနေတဲ့ သမီးဖြစ်သူ အသက် ၆၉ နှစ်အရွယ် မောလ်ထရူကို ခုလထဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာက ပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၉ နှစ်က ပူရင်တန်ဟာ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီး အင်ဒီးယားနားပြည်နယ် ဂယ်ရီမြို့မှာ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားတုန်းက သူဟာ လက်မထပ်ရသေးပါဘူး။
အမှန်တကယ်က ပူရင်တန်ရဲ့သမီးလေးကို မွေးဖွားပေးတဲ့ ဆေးရုံက ဆရာဝန်တစ်ဦးက အဲဒီကလေးကို မွေးစားဖို့ ယူဆောင်သွားတာလို့ နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သမီးဖြစ်သူ မောလ်ထရူဟာ Ancestry.com မှာ DNA စစ်ပြီး မိခင်အရင်းကို လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရတယ်လို့ Times သတင်းစာက ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တွေဖို့ ခုလထဲမှာပဲ ဖလော်ရီဒါကို မောလ်ထရူသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
“သမီး မသေဘူးနော်”လို့ မိခင် ပူရင်တန်က သမီးဖြစ်သူ မောလ်ထရူနဲ့ ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဝမ်းသာအားရ ပြောဆိုပါတယ်။
အမေက သမီးကို ပြန်တွေ့လို့ သိပ်ကို ဝမ်းသာနေပါတယ်ဆိုပြီး မောလ်ထရူက ပြောပါတယ်။
လှနျခဲ့တဲ့ ၆၉ နှဈက သဆေုံးသှားပွီဆိုတဲ့ သမီးနဲ့ပွနျလညျဆုံစညျးခှငျ့ရလိုကျတဲ့ အသကျ ၈၈ နှဈအရှယျ အဘှားအို
၁၂၊ ဒီဇငျဘာ၊ ၂၀၁၈
လှနျခဲ့တဲ့ ၆၉ နှဈက မီးဖှားနစေဉျအတှငျးမှာ သဆေုံးသှားတာလို့ဆိုတဲ့ သမီးဖွဈသူဟာ အသကျ ၈၈ နှဈအရှယျ မိခငျဖွဈသူနဲ့ ပွနျလညျတှဆေုံ့သှားပွီလို့ နယူးယောကျတိုငျးမျ သတငျးစာက ဖျောပွပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံ ဖလျောရီဒါပွညျနယျက ပူရငျတနျဆိုသူ အမြိုးသမီးကွီးဟာ ဗားမောငျ့မွို့မှာနတေဲ့ သမီးဖွဈသူ အသကျ ၆၉ နှဈအရှယျ မောလျထရူကို ခုလထဲမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ တှဆေုံ့ခဲ့တာလို့ နယူးယောကျတိုငျးမျ သတငျးစာက ပွောပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ ၆၉ နှဈက ပူရငျတနျဟာ အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျဖွဈပွီး အငျဒီးယားနားပွညျနယျ ဂယျရီမွို့မှာ သမီးလေးတဈယောကျကို မှေးဖှားတုနျးက သူဟာ လကျမထပျရသေးပါဘူး။
အမှနျတကယျက ပူရငျတနျရဲ့သမီးလေးကို မှေးဖှားပေးတဲ့ ဆေးရုံက ဆရာဝနျတဈဦးက အဲဒီကလေးကို မှေးစားဖို့ ယူဆောငျသှားတာလို့ နယူးယောကျတိုငျးမျ သတငျးစာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သမီးဖွဈသူ မောလျထရူဟာ Ancestry.com မှာ DNA စဈပွီး မိခငျအရငျးကို လိုကျလံရှာဖှခေဲ့ရတယျလို့ Times သတငျးစာက ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
မိခငျဖွဈသူနဲ့တှဖေို့ ခုလထဲမှာပဲ ဖလျောရီဒါကို မောလျထရူသှားရောကျခဲ့ပါတယျ။
“သမီး မသဘေူးနျော”လို့ မိခငျ ပူရငျတနျက သမီးဖွဈသူ မောလျထရူနဲ့ ပွနျတှတေဲ့အခြိနျမှာ ဝမျးသာအားရ ပွောဆိုပါတယျ။
အမကေ သမီးကို ပွနျတှလေို့ သိပျကို ဝမျးသာနပေါတယျဆိုပွီး မောလျထရူက ပွောပါတယျ။
Posted in ထူးဆန်းထွေလာ, နိုင်ငံတကာLeaveaComment on လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၉ နှစ်က သေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ သမီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရလိုက်တဲ့ အသက် ၈၈ နှစ်အရွယ် အဘွားအို